Umhla My Pet » Endizithandayo Animal-Friendly Sezibini
Lucky wena - ufumanisa uye umntu emangalisayo ezifanayo uthando lwakho kweefilimu, umntu uyakwazi ukubona kakhulu uburharha, kwaye adores izilwanyana. Ukuba ushiywa lixesha izimvo ubusuku beyijongisisile yonke licuthwa uthando, kutheni ungaqali kwezinye zokupha njengoko isibini, ingakumbi ukuba lubandakanye zokuzonwabisa sele uzakuyonwabela? Nazi ezinye iingcebiso ngeendlela unganceda ngaphandle, onke ngoncedo iqabane lakho:
1.) Photography: ikhusi zatshatyalaliswa, ehlangula vela ufuna uncedo iifoto nokufakwa umgangatho izilwanyana lusetyenziswayo ewongeni. Ingaba wena okanye iqabane lakho wayeyincutshe Instagram, okanye uyandithanda ukucacisa Amahlandinyuka ukuvuleka? Oku kuba kufanelekile enkulu ngenxa yenu, kwaye oko ngokulula ukwenza umahluko inani izilwanyana yamkelwa. Qhagamshelana ikhusi lakho ukuze ubone ukuba uyakwazi ukunikela ngeenkonzo zakho, kwaye wabelane nabo ubuso cute kwiisayithi zokuncokola ukunceda bawafumane amakhaya.
2.) ukucoca: Abagulayo kwe clutter? Kulula kakhulu ukuba ukuqokelela izinto ezininzi kakhulu njengoko isibini, ukuze sithathe ithuba ukucoca indlu KUNYE nokubonelela izinto olufunekayo ukuze iindawo zasekuhlaleni, ehlangula. kwezikhuseli, ngeengubo, amaphephandaba, izitya, placemats, kunye nangaphezulu baba luncedo ukuba la maqela. Banike umnxeba, ubone ukuba yintoni na ekufuneka. Uya kubanceda phandle nesixhaso ngelixa ukwenza ikhaya lakho ecwangciseke.
3.) ukupheka: Osika ukudla kunye / okanye isilwanyana mveliso in up izidlo zakho kunye. Jay-Z and Beyonce nto, ngoko kutheni na? Vegan kunye imifuno licaca izitya enimthandayo unako ukwenza ipizza ebusuku kude ezinomdla kakhulu, kwaye oku yokuphila elikhwelelayo ingayenza ezintsha okupheka kaJona yokutyela. Kukwenza ngenxa izilwanyana, kwimpilo yakho, okanye nje ukuba lubandakanye imveliso ezininzi dinala zakho. Ngolunye uhlobo, oko luncedo - kwaye okunencasa!
4.) hamba: Yenza ababini uyamthanda ukubetha indlela? Ohamba kuluhlu wakho umnqweno, kodwa soze kubonakala ukuba yenzeke? iindawo ezininzi, ehlangula kufuneka sokuthutha phakathi kweendawo zazo kunye nezinye zokuhlangula okanye kumakhaya. Ukuba uza kuphuma edolophini kunjalo, okanye ukuba kudala ndifuna ukubona enye inxalenye karhulumente, kubingelela ukuthutha isilwanyana, nokuba yinto inxalenye nje ngendlela.
5.) Ubugcisa nobuChule: Ukuba bobabini kwenzeka ukuba umthande iiprojekthi DIY (ingqalelo zonke izithandane © kunye guys kunye nezixhobo,) ngoko le projekthi kumnandi kuwe. Kunye izinto ezimbalwa kunye neqela, uyakwazi ngokulula ukwakha iindawo yengqele okanye izindlu inja izilwanyana eziyabulayo ekuhlaleni. Oku kwakhona uvavanyo olukhulu ubudlelwane, kakhulu ezifana Ikea iintengo. Ukuba nobabini bayazithanda ezobugcisa, ukwenza ezinye iziqwenga kunye ukunikela kwabo ukuba ongenzi isilwanyana ngentengiso okanye usebenzise ukuphakamisa ulwazi.
6.) iikhompyutha: Ukuba Tech-kwezobugcisa, ukunika ukunceda zokuhlangula okanye zokufihla uyilo lwabo iweb page okanye webhsayithi zentlalo. Ukuba blog, ubhale amanqaku ngezi izibonelelo zoluntu, okanye ukubanceda kuba singena zabo.
7.) Ukunxulumana: Ndisebenza kumakhaya abalupheleyo eKentucky, kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba inkoliso abahlali alufumani iindwendwe ezininzi. Ukuba isilwanyana na ubuntu elifanelekileyo kulo msebenzi, thetha iqela unyango isilwanyana ukuqalisa inkqubo ndilungiselela isilwanyana sakho njengetsha. Sonke siyayazi ukuba kukhuthaza intsebenziswano isilwanyana, ngoko kutheni ningazisondezi ukuba umntu ufuna intuthuzelo? Cinga ezifundisa ezi nkonzo okhuseleko ubundlobongela emakhaya, abantwana obagcinileyo, kwaye izigulane iyihospice, kakhulu. Musa ukucinga iikati kuphela nezinja ukwenza lo msebenzi, nokuba! Ndikhe ndabona nezifudumezi, iihagu, nkqu amahobe bonke abenza inxenye yabo!
8.) Sports: Ukuba wena s'thandwa benu bayanithanda ukuhlala esebenzayo, cinga ekulungelelaniseni inxaxheba 5K ukuphakamisa ulwazi malunga inkohlakalo yezilwanyana, okanye enze ukuhamba izinja ngalinye kwisiganeko nokwamkelwa basekuhlaleni. Mhlawumbi kubamba injana "ngokobuhlanga" okanye SuperBowl intshontsho okuyingenelo basekuhlaleni wayenobuntu Society wakho. Uya kukunceda abahlelelekileyo kwiinzame zazo ngexesha uzonwabisa, kwaye leya win-win.
9.) Salibala: kumaziko ethu izilwanyana zizele izinja kunye neekati ekufuneka ngonaphakade amakhaya, kunye namaqela nokuhlangula ngokungxamisekileyo kufuneka owamkela ezi zilwanyana ukuze kuthintelwe Euthanasin. Ukuba unguTata homebody kwaye indawo engaphezulu sinyanzelise isilwanyana okwethutyana, qhagamshelana iindawo zakho izilwanyana zasekuhlaleni kunye namaqela nokuhlangula. Yintoni ngcono kunokugcina ubomi kwaye ukuya kudlala nomhlobo omtsha inoboya?
Nandipha kwezi zinto enceda njengoko isibini, kwaye ndiyazi ukuba kunye, wenza umahluko kubomi izilwanyana eziningqongileyo.